ဘဝမှာ တွေဝေတဲ့အခါ • Brand You Academy
ကျွန်မက ပုံမှန်အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက် တော်တော်မြန်ပါတယ်။ အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို အချိန်ယူ စဉ်းစားရတာမျိုး မကြိုက်ပါဘူး။ Risk ယူရမှာ၊ ကြိုးစားရမှာ မကြောက်သလို တစ်ခုခုမှားယွင်းတဲ့အခါ၊ လွဲချော်တဲ့အခါ တောင်းပန်ရမှာ၊ ပြန်ပြင်ရမှာလည်း လုံးဝမကြောက်တတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ရှားရှားပါးပါး တခါတလေ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမရဘဲ တွေဝေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအချက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး စဉ်းစားတယ်ဆိုတာလေး မျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ ဘာကြောင့်တွေဝေရတာလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စရပ်ကို ကိုယ်တကယ်မသိလို့လား? မကျွမ်းကျင်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လို့လား? ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရင်မဆိုင်ရဲလို့လား?
၂။ အကျိုးအပြစ်ကို ချိန်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက ရေတိုမှာမသိသာပေမယ့် ရေရှည်မှာ ကောင်းမှာလား?
၃။ ကိုယ်က နောင် ၃ နှစ်လောက်မှာ ဒီကိစ္စကို ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခါ လုပ်လိုက်ရလို့ နောင်တ ရမှာလား? မလုပ်လိုက်ရလို့ နောင်တရမှာလား?
၄။ ကိုယ့်ရဲ့ အခြေခံ တန်ဖိုး၊ စံနှုန်းတွေ (Values) တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိလား? အဲဒါက ကျွန်မအတွက် တော်တော်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ တခါတလေ အများအကြိုက် အောင်မြင်မှု၊ ငွေကြေး၊ နာမည်ကြီးမှုတွေနောက်ကို လိုက်မှာလား? ကိုယ့် တန်ဖိုးစံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကိုယ်လေးစားရတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အားပေးချီးမြှောက်လေးစားတာကို ယူမှာလားဆိုတာ ကျွန်မအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ပေတံတစ်ချောင်းပါပဲ။
၅။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုပါ။ ဒါလုပ်လိုက်လို့ ကိုယ်ရမယ့် ပျော်ရွှင်မှုက သူများကို မထိခိုက်ရင်လုပ်ပါတယ်။
ဘဝက တိုတိုလေးပါ။ မနက်စာစားတဲ့အချိန် မုန့်ဟင်းခါးစားမှာလား၊ ထမင်းကြော်စားမှာလားဆိုတာကို တော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်ဆိုရင် သင့်အချိန်တွေ တော်တော်ကုန်နေပါပြီ။
လုပ်စရာရှိတာ မြန်မြန်သွက်သွက်လုပ်၊ ဘဝမှာ မဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်၊ မသွားဖူးတဲ့ ခရီးတွေသွား၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ပြန်တုန်လှုပ်စေမယ့် challenge တွေလုပ်၊ စိတ်ပျက်စရာလူတွေကို ဘဝထဲက ထုတ်၊ ကိုယ်သေသွားတဲ့အခါ ဘဝမှာ တစ်ခုခုတော့ ကောင်းတာလေးတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့ သေရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
ကဲ.. တွေဝေမနေဘဲ အကျိုးရှိတာ တစ်ခုခု ထလုပ်တော့နော်!
NextNew Normal အတွက် ပြင်ဆင်ရမဲ့ အချက် ၅ ချက်Next